किन खल्लो हुँदैछ दम्पतीको यौन जीवन ? | Daily State News
किन खल्लो हुँदैछ दम्पतीको यौन जीवन ?
३० फाल्गुन २०७४, बुधबार १३:१६ मा प्रकाशित - डेली स्टेट न्युज
यौन सम्बन्धको चर्चा गर्दा हामी लाजले खुम्चन्छौं । यौनलाई छाडा वा लाजमर्दो कुराको रुपमा हामीले बुझेका छौं । जबकी यो जीवन पद्धतीकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो । यो प्राकृतिक र स्वभाविक प्रक्रिया हो ।
यौन मनोरञ्जन मात्र होइन । यौनले सृष्टिलाई चलायमान राख्छ । यौनले दाम्पत्य जीवनलाई पूर्णता दिन्छ । यौनले पति-पत्नीलाई थप निकट राख्छ । यौनले दम्पतीको आपसी सम्बन्ध सुमधुर राख्छ । यौन जीवनलाई कसरी सुखमय बनाउने ? यस सम्बन्धमा धेरै खोज भएका छन् । पुस्तकहरु लेखिएका छन् । यस्ता पुस्तक प्रचिन समाजमा पनि प्रचलित थियो ।
कामसूत्र यस्तो ग्रन्थ हो, जो हजारौं बर्षदेखि मानिसहरुलाई प्रेम-सम्बन्ध र अन्तरंग पलको लागि आवश्यक मार्गदर्शन दिदै आएको छ । यसमा यौन सम्बन्धी जानकारी दिइएको छ, जसले यौन जीवनलाई थप रोमान्चक र उत्कृष्ट बनाउन सहयोग गर्छ । हिन्दु दार्शनिक वात्सायनले ४०० देखि २०० इश्वीमा कामसूत्र लेखेका थिए । यसमा यौन सम्बन्धी खुलेर लेखिएको छ ।
छाडा कुरा होइन
तर, दुखलाग्दो चाहि के भने अहिलेको सताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि हामीले यौनलाई छाडा वा विकृत रुपमै हेरिरहेका छौं । त्यही कारण यौन सम्बन्धको बारेमा चर्चा गर्नु वा यौन जीवनका विभिन्न आयम खोज्नुलाई हामी अपराध ठान्छौं । हिनतावोध गर्छौ ।
यौन आफैमा छाडा होइन । यौन आफैमा लाज लाग्ने कुरा पनि होइन । तर, प्राचिन शास्त्रले यौनजन्य कुरालाई नितान्त व्यक्तिगत कुरा मानेको छ । साथै यस्ता कुराहरुमा गोपनियता अपनाउनुपर्ने सुझाएको छ । गोपनियता अपनाउनुपर्छ भन्दैमा यसबारे कुरा नगर्ने भन्ने चाहि होइन ।
जब यौनलाई भित्र-भित्रै गुम्साएर राखिन्छ, त्यो कुण्ठाले यौनजन्य विकृति पैदा गर्छ । त्यसैले यौनका सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्छ । खुला वहस हुनुपर्छ ।
दाम्पत्य जीवनमा खटपट
अहिले धेरै दम्पतीबीच खटपट ल्याउने निहुँ नै यौन हो । भनिन्छ, नेपाली दम्पतीको खटपट सिरकमुनीबाट सुरु हुन्छ । यसले दम्पतीबीचको यौन असन्तुष्टिलाई संकेत गर्छ । यौन असन्तुष्टिकै कारण बिवाहेत्तर सम्बन्ध स्थापित हुने संभावना रहन्छ । परस्त्री वा परपुरुषसँगको सम्पर्क बढ्नुमा पनि दम्पतीबीचको यौन-असन्तुष्टि नै मूल कारण हो ।
यौनका विषयमा भिन्न भ्रमहरु व्यस्त छन् । यसलाई हाम्रो समाजले भित्र-भित्रै गुम्साएको छ । आफ्नो यौन समस्यालाई मानिसहरुले खुलेर चर्चा गर्न सक्दैनन् । लुकीछिपी यौनजन्य जिज्ञासा मेटाउने गरिन्छ । नेपाली समाजमा यौनजन्य विकार र विकृतिको रुप भयावह छ ।
यौन मनोविद करुणा कुँवरका अनुसार अधिकांश नेपाली दम्पतीको यौनजीवन सुखमय छैन । उनी के पनि भन्छिन् भने, ‘अधिकांश नेपालीलाई यौन सम्पर्क गर्ने उचित विधी नै थाहा छैन ।’
यौन असन्तुष्टिको कारण
हुन त यौन सम्बन्ध के हो ? कसरी राख्ने ? यौन सम्बन्धलाई कसरी बढी रोमान्टिक बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पुस्तकहरु लेखिएका छन् । धार्मिक शास्त्रहरुले समेत यसलाई समूचित ढंगले व्याख्या गरेको छ । विभिन्न पर्व, उत्सवहरुले सांकेतिक रुपमा यौनको महत्व, समय र विधीलाई दर्शाउने गरेको छ । तर, हामीले त्यसतर्फ खास ध्यान दिएका छैनौं ।
यौनका विषयलाई लिएर मानिसहरुमा अनेक-अनेक समस्या छ । यौन असन्तुष्टि, सिघ्र स्खलन, यौनाङ्गको आकार आदिलाई लिएर मानिसहरु चिन्तित छन् । यीनै कारणले आफ्नो यौन जीवन रसपूर्ण नभएको उनीहरुको निष्कर्ष छ । त्यही कारण यौनवर्द्धक औषधी एवं उपचार पद्धतीको बजार बढिरहेको छ । जबकी यौन असन्तुष्टि र सन्तुष्टिमा वाह्य भन्दा आन्तरिक कारण बढी जिम्मेवार हुन्छ ।
शारीरिक क्रिया, मानसिक उपस्थिती
निश्चय नै यौन, शारीरिक क्रिया हो । तर, यसमा मानसिक उपस्थिती सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । मानसिक लगाव विना यौन क्रिया रसपूर्ण हुँदैन । जब दुई पार्टनरवीच यौन सम्बन्ध हुन्छ, उनीहरुले मानसिक उपस्थिती पनि उत्तिकै जनाउनुपर्ने हुन्छ ।
यौन सम्वन्धलाई सुमधुर, सुखमय र रसपूर्ण बनाउनका लागि विभिन्न विधीहरुको सदियौंदेखि अभ्यास हुँदै आएको छ । यौन सम्पर्कको विधीलाई मूलत तीन चरणमा राखिएको छ । यौन सम्पर्क गर्नु अघि, सम्पर्कको बेला र सम्पर्कपछि के गर्ने भन्ने कुरा विधिगत् रुपमै सिकाइएको छ ।
यौन सम्पर्कका लागि सर्वप्रथम त दुबै पार्टनर मानसिक रुपले तयार हुनुपर्ने वताइन्छ । मानसिक तनाव, धपेडी, थकान, हतार आदिमा यौन सम्वन्ध सुमधुर हुँदैन । साथै यौनसम्बन्धका लागि स्थान, पार्टनरको हाउभाउ सबै कुराले भूमिका खेल्छ ।
यौन क्रिया एवं विधि
यौन सम्बन्धको पूर्व तयारीको रुपमा प्राकक्रिडाको अभ्यास हुँदै आएको छ । यसले यौन सम्वन्धलाई उत्कर्षमा पुग्न सहयोग गर्छ । प्राकक्रिडा भनेको यौन सम्बन्ध राख्नुअघि गरिने त्यही क्रियाकलाप हो, जसले दुवै पार्टनरको यौन रुची र उत्तेजना बढाइदिन्छ ।
यौन सम्बन्धलाई रोमान्टिक बनाउन विभिन्न आसनहरुको अभ्यास हुँदै आएको छ । एउटै आसनमा त्यती सन्तुष्ट नहुने भएकाले यौन सम्बन्धका लागि विभिन्न आसन अपनाउन सकिन्छ । यौन सम्पर्कपछि पनि पार्टनरको अन्तरंग सम्बन्ध कायम रहनुपर्छ ।
पछिल्ला अध्ययनहरुले के भन्छ भने, सक्रिय यौन जीवनले दाम्पत्य सम्बन्धलाई दिगो र सुमधुर बनाउँछ । त्यतीमात्र होइन, यसले दम्पतीको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । मानसिक विकार हट्छ । नियमित यौन सम्बन्धले मुटुलाई स्वस्थ्य राख्ने बताइएको छ ।
तर, जथाभावी वा बर्बर ढंगले गरिने यौन सम्बन्धले सुख होइन, कष्ट दिन्छ । यस्ता यौन सम्बन्धले दाम्पत्य जीवनलाई थप पीडादायी बनाउँछ । त्यसैले यौन सम्बन्ध पनि आफैमा अनुशासित र मर्यादित हुनुपर्छ ।